Pelagic နှင့် benthic အဏ္ဏဝါသက်ရှိများ, ခြားနားချက်များဘာတွေလဲ? | ငါး၏
Pelagic နှင့် benthic အဏ္ဏဝါသက်ရှိ
ကားလို့စ်ဂါရစ်ဒို | | ငါး
သမုဒ္ဒရာနှင့်သမုဒ္ဒရာနှစ်ခုလုံးသည်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယမရှိပါ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအရအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည် ကမ္ဘာမြေ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းတွင်သူတို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်နေရာများပြုလုပ်သောမရေမတွက်နိုင်သော houses ည့်သည်များစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ပုံစံ၊ အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အလေ့အထများ၊ အစာကျွေးခြင်းပုံစံများကွဲပြားသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ရေနေဂေဟစနစ်ဟာတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး အလွန်ကွာခြားပါတယ်။ ၄ င်းတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းတို့အားသက်ရောက်မှုတစ်ခုသည်အလွန်တိကျသောနည်းဖြင့်ဖြစ်သည် စည်ပင်သို့မဟုတ်မခံရဖို့စွမ်းရည်။
ယုတ္တိနည်းအရရေတိမ်ပိုင်း (သို့) ကမ်းခြေအနီးရှိလူနေမှုအခြေအနေများသည်မတူညီပါ။ အဲဒီမှာအလင်းကပိုပေါများတယ်၊ အပူချိန်ကမူအပြောင်းအလဲတွေပိုများတယ်၊ ရေစီးဆင်းမှုနဲ့ရေလှုပ်ရှားမှုကပိုပြီးမကြာခဏ၊ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ သို့သော်နက်နဲသောပင်လယ်ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သောအခါလုံးဝကွဲပြားသောပုံကိုတွေ့ရသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သက်ရှိသတ္တ ၀ ါများသည်သမုဒ္ဒရာ (သို့) သမုဒ္ဒရာ၏livesရိယာအပေါ် မူတည်၍ အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်။
ငါတို့မသိသောစကားလုံးနှစ်လုံးသည်သူတို့အသွင်အပြင်ကိုဖော်ပြနေသည်။ pelagic y ကဗျာ။
1 Pelagic နှင့် benthic
2 pelagic သက်ရှိများ၏အဓိပ္ပာယ်
3 Pelagic ငါး
3.1 ကမ်းရိုးတန်း pelagics
3.2 သမုဒ္ဒရာ pelagics
4 pelagic သက်ရှိများအတွက်ပြောရလျှင်
5 benthic သက်ရှိများ၏အဓိပ္ပါယ်
6 Benthic ငါး
7 benthic သက်ရှိများ၏ပြောရလျှင်
Pelagic နှင့် benthic
Pelagic သည် pelagic ဇုန်အထက်သမုဒ္ဒရာ၏အစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရေတိုင်ပေါ်တွင်တိုက်ကြီးကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း (သို့) အပေါ်ယံလွှာတွင်မတည်ရှိဘဲ၎င်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။ ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောနက်ရှိုင်းမှုမရှိသောရေလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, benthic ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရာအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ပင်လယ်နှင့်သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်နှင့်ဆက်စပ်.
အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်ငါးများအပါအဝင်ရေနေသတ္တဝါများကိုမိသားစုကြီးနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ pelagic သက်ရှိ y benthic သက်ရှိ.
pelagic သက်ရှိတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါငါတို့နေထိုင်တဲ့မျိုးစိတ်အားလုံးကိုရည်ညွှန်းနေတယ် သမုဒ္ဒရာနှင့်ပင်လယ်အလယ်ပိုင်းရေ, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပြင်အနီး။ ထို့ကြောင့်ဤရေနေသတ္တဝါများသည်အလွန်နက်ရှိုင်းသောareasရိယာများနှင့်ထိတွေ့မှုကိုအလွန်ကန့်သတ်ထားသည်မှာရှင်းနေပါသည်။
၎င်းတို့သည်မျက်နှာပြင်မှမီတာ ၂၀၀ အထိနက်သည့်အလင်းတန်းများတွင်ဖြန့်ဝေထားသည်။ ဒီအလွှာကိုလူသိများတယ် phiotic ဇုန်.
pelagic သက်ရှိအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ nekton, plakton နှင့် neuston ။
၎င်းတွင်ငါး၊ လိပ်၊ cetaceans, cephalopods စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ၄ င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် အားကြီးသောသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများကိုတန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသည်.
၎င်းတို့သည်သေးငယ်သည့်ရှုထောင့်များရှိခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်အပင်အမျိုးအစား (phytoplankton) သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစား (zooplankton) တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီသက်ရှိတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာဗေဒကြောင့် သူတို့ကသမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းတွေကိုမရိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိုဆွဲငင်နေကြသည်။
သူတို့ဟာသက်ရှိသတ္တ ၀ ါတွေဖြစ်ပြီးရေမျက်နှာပြင်ကိုသူတို့နေအိမ်ဖြစ်စေတယ်။
pelagic ငါးကဲ့သို့သောအုပ်စုကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါက၎င်းတို့သည်နေထိုင်သောရေနေareasရိယာများပေါ် မူတည်၍ ထပ်တူခွဲခြားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤအုပ်စုအတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့လေ့ရှိသည့်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားမျိုးစိတ်များရှိသည်။ ၄ င်းတို့အားလုံးသည်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိပြီးကမ်းရိုးတန်းဆွေမျိုးများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုနှင့်မွေးဖွားနှုန်းမြင့်မားမှုရှိသော်လည်းလူ ဦး ရေ၏သိပ်သည်းဆမှာများစွာလျော့နည်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးစေသည်။ ဤအချက်သည်အဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့သည်massiveရာမငါးဖမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
pelagic ဟူသောဝေါဟာရသည်သမုဒ္ဒရာနှင့်သမုဒ္ဒရာအချို့ကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကို၎င်း၏အနေအထားတွင်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောစကားလုံးလည်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ "အနက်ဆုံးသောတွင်း"။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် pelagic သက်ရှိများနှင့်ငါးများကိုရည်ညွှန်းသည့်နည်းတူ၎င်းတို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းဖြေရှင်းနိုင်သည် ငါးသို့မဟုတ်အနက်ဆုံးသက်ရှိ.
Benthic သက်ရှိများသည်အတူတကွတည်ရှိနေသောအရာများဖြစ်သည် ရေနေဂေဟစနစ်နောက်ခံpelagic သက်ရှိနှင့်မတူဘဲ။
အလင်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအသွင်သဏ္whereာန်ရှိသောပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏ဤဒေသများတွင်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိအဓိကထုတ်လုပ်သူများကိုတွေ့ရသည်။ photosynthesizers (သူတို့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း) ။
ရှိပြီးသား aphotic နောက်ခံအလင်းမရှိခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာသောနေရာများတွင်တည်ရှိခြင်း၊ စားသုံးနေသောသက်ရှိများသည်အော်ဂဲနစ်အကြွင်းအကျန်များနှင့်မြေထုဆွဲအားကိုအပေါ်ယံရေမျက်နှာပြင်မှဆွဲယူသောအဏုဇီ ၀ သက်ရှိများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တစ် ဦး ထူးခြားတဲ့အမှုတဖကျတှငျဘက်တီးရီးယားဖြစ်ပါတယ် ဓာတုပစ္စည်း နှင့်အခြားအပေါ် သပိတ်မှောက် (သူတို့ကအခြားသက်ရှိများပေါ်တွင်မူတည်သည်)၊ သမုဒ္ဒရာအလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်အချို့ရှိသည့်နေရာများကဲ့သို့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာများတွင်တည်ရှိသည်။
ပထမတစ်ချက်မှာအထက်ပါကိုဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် benthic သက်ရှိများနှင့်အလွန်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောကြောင့်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးစိတ်တစ်ခုမှာအလွန်ကျော်ကြားပြီးလူသိများသည်။ သန္တာ.
သန္တာကျောက်တန်းများသည်မိခင်ကမ္ဘာ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးကျောက်မျက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယမရှိပါ။ သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်သူတို့သည်လည်းအများဆုံးခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်။ အချို့သောငါးဖမ်းနည်းစနစ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သော trawl ပိုက်များအကြောင်းပြောကြသည်။
များစွာသောအခြားသက်ရှိသတ္တဝါများသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော benthic မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုပါ echinoderms (ကြယ်များနှင့်ပင်လယ်ရေ urchins), အ pleuronectiform (ဘဝါးများနှင့်တူ), အ ကျောက်တံတား (ရေဘဝဲနှင့်ငါးရှသား)၊ နှစ်ထပ် y ခရု နှင့်အချို့အမျိုးအစားများ ရေညှိ.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း benthic သက်ရှိများအတွင်းရှိငါးများကိုအမျိုးအစားဖြစ်သော peluronectiform အမျိုးအစားခွဲခြားထားသောငါးအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ flounder, ကြက်နှင့်တစ် ဦး တည်းသော.
ဤငါးများသည်ထူးခြားသော shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ရှိခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်သိသိသာသာနောက်ပိုင်းတွင်ချုံ့သည် ပြားချပ်ချပ်ပုံသဏ္.ာန်အဘယ်သူမျှမလစျြလြူရှု။ fingerlings ၏, သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီဘက်မှာမျက်စိနှင့်အတူနှစ် ဦး နှစ်ဖက် symmetry ရှိသည်။ သူတို့ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့နှစ် ဦး နှစ်ဖက် symmetry ။ သူတို့နှစ်ဖက်စလုံးမှအနားယူသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ပြားချပ်ချပ်ကိုယ်ခန္ဓာရှိပြီးအချို့မှာအထက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။
စည်းကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည် အသားစားနှင့်မတော်မတရားငါး, အဘယ်သူ၏ဖမ်းယူမှုများနောက်ယောင် technique ကိုဖွငျ့ထုတ်ယူနေကြသည်။
သူတို့ကအချက်အပြုတ်နှင့်ငါးဖမ်းလယ်ပြင်၌အသုံးများသောကြောင့်အသုံးအများဆုံးမျိုးစိတ်, ဖြစ်ကြသည် ဖိနပ်အောက်ခံအသား နှင့် ဥရောပငါးခွေးလျှာ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆာန်နိုင်ငံ၏ taxonomy နှင့်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်ကွဲပြားသောသိပ္ပံဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါကသက်ရှိများနှင့် benthic များကိုရိုးရှင်းစွာတွေ့ရှိနိုင်သည် "Bentos" o "Benthic".
သဘာဝသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်။ pelagic နှင့် benthic သက်ရှိတွေအကြောင်းပြောရရင်အရမ်းရှုပ်ထွေးပြီးပိုရှုပ်ထွေးတယ်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုအနည်းငယ်သည်ကျယ်ပြန့်သောအချက်များဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » ငါး » Pelagic နှင့် benthic အဏ္ဏဝါသက်ရှိ
ဤကဲ့သို့သောဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ထက်ပိုပြီးဘာမှမရှိပါ။ ကယ်လိုရီအတွက်သင့်ကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ already ရှိပြီးသား၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်
jose fernando obama အားပြန်ကြားပါ
javier ချားဗေ့စ် ဟုသူကပြောသည်
javier chavez အားပြန်ပြောပါ